Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Galmudug iyo xaaladda oo kasii dartay - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Galmudug iyo xaaladda oo kasii dartay
Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Galmudug iyo xaaladda oo kasii dartay
Cadaado (Caasimadda Online) – Magaalada Cadaado waxaa ku sugan Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir iyo Madaxweyne ku xigeenka Maxamed Xaashi Carabey iyo Xildhibaano aan badneen oo ka tirsan Galmudug, waxay abaabulayaan shirar ka dhan ah Madaxweyne Xaaf iyo Madaxda Xukuumadda Sh/Maxamed Shaakir Cali Xasan.
Shir deg deg ah oo ay yeesheen xildhibaano iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiirada Galmudug ayaa waxa ay kaga hadleen khilaafka Cusub ee Madaxda Galmudug.
Xildhibaanada iyo Wasiirada shiray ayaa waxa ay sheegeen in hadalkii kasoo yeeray madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi iyo guddoomiye Cali Gacal Casir uu yahay mid fowdo ah,isla markaana wax u dhimaya maamulka aan weli sal fadhiisan ee Galmudug.
Waxa ay sheegeen in labadooda aysan aheyn dad cusub,balse iyagu ay Galmudug waxka dhisaan xilligaana aan looga baahneyn in ay khilaaf Cusub abuuraan.
Ugu dambeyn waxa ay ku baaqeen in hadalkii kasoo yeeray guddoomiyaha iyo madaxweyne ku xigeenka ay ku mudan yihiin in loo maxkamadeeyo sida ay hadalka u dhigeen.
Hadalka kasoo baxay xildhibaanada iyo wasiirada galmudug ayaa dadka siyaasada indha indheeya waxa ay sheegeen in uu yahay mid sii xoojinaya khilaafka cusub ee madaxda Galmudug.